रगत आउने यो रुख « रिपोर्टर्स नेपाल
रगत आउने यो रुख
प्रकाशित मिति : २८ आश्विन २०७८, बिहीबार
ड्रागन रुखसँग अचम्म र अद्वितीय विशेषता छ । यो विश्वकै फरक प्रजातीको रुख हो । यसको बाहिरी आकार विशिष्ट छ । यसका पातहरु हाँगाको टुप्पोमा बाक्लो छाता जस्तै आकारमा रहेका हुन्छन् ।
यो सदावहार हरियो हुन्छ । यो चट्टानी मैदान र उच्च भेगमा पाइन्छ । जसकारण यसले धेरै वर्षसम्म पानी संरक्षण गरेर राख्न सक्छ । यस्ता रुखहरु आइसल्याण्ड र पश्चिमी मोरक्कोको नजिकै पाइन्छन् । यिनीहरु अरेबियन समुन्द्रमा अवस्थित छन् । उक्त रुखलाई काटिएको खण्डमा यसबाट मानिसको रगत जस्तो रातो तरल, ¥याल आउछ, जसको कुनै गन्ध र स्वाद हुँदैन ।
यो रुखमा एन्टि–अक्सिडेन्ट फिनोलहरु र एन्टि– ज्वलनशील यौगीकहरु हुने भएकाले यसबाट मानिसको रगत जस्तो तरल पदार्थ आउछ । यसबाट आउने ¥याल जस्तो तरलमा प्रभावकारी पदार्थ रहेको हुन्छ, जसलाई डार्को भनिन्छ । यो स्वस्थ्य समस्या समाधान गर्न धेरैजसो चिकित्सा क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छ । यो औषधि उद्योगको एक भाग हो । यसबाट निम्न उपचारका लागि औषधि बनाइन्छ ।
१.घाउ निको पार्न
२.जलेको ठाँउमा लगाउन
३.शरीरको कुनै भागबाट बगिरहेको रगत रोक्न
४.छाला रोगको उपचार गर्न
५.पेटसम्बन्धि रोगहरु उपचार गर्न
डार्को अरु केही उद्योगहरुमा पनि प्रयोग गरिन्छ । यो मन्जन, मसि, पोलिश बनाउन, ऊन र मार्बलमा रंग लगाउन र लिपिस्टिक उद्योगहरुमा पनि प्रयोग हुन्छ । यो रुखले रातो मह बनाउछ जो विश्वमै सबैभन्दा बढी महंगो र स्वास्थ्यकालागि फाइदाजनक छ । यसको पातहरु डोरी बनाउन प्रयोग गरिन्छ ।
एकजनाले कति जनासम्म मान्छेको अनुहार सम्झन सक्छ
तपाईं कतिजनाको अनुहार सम्झन सक्नुहुन्छ ? एक सय, दुई सय, हजार या लाख ? यो
यी पुरुषका ३९ पत्नीसहित सन्तान एउटै घरमा
यी हुन् जिओना । यीनको ३९ पत्नी र २ सय जति सन्तान दरसन्तान छन् ।
एकैपटक १० बच्चा जन्माएकी भनिएकी महिला गर्भवती नै भएको खुलेपछि…
केही महिना अघि विश्वभर एउटा खबरले सनसनी मच्चायो । एकजना महिलाले एकैपटक १० बच्चालाई जन्म
भूत आउने दरबार !
स्विडेनका राजपरिवारका सदस्यहरुमध्ये एउटा परिवारको दरबारमा बारम्बार भूत आएको खबर सार्वजनिक भयो । रोचक पक्ष
यी हुन् खतरनाक महिला जासुस
जासुसहरु अपत्यारिलो हुन्छन् । उनीहरु भेष बदल्ने मात्र नभई आश्चर्यजनक तरिकाले काम गर्छन् । जस्तोसुकै
यी युवकको आधा दाह्री
एजेन्सी, २५ असोज । पछिल्लो दिनमा दाह्री पाल्ने ट्रेन्ड छ । मानिसहरु अलग-अलग स्टाइलको दाह्री
कोरोनाको कारण सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो
एजेन्सी, २४ असोज । कोरोना भाइरसले यतिखेर पुरै विश्वलाई आक्रान्त बनाएको छ । यसको असर
आमा र छोरीको एकैदिन विवाह, एकैठाउँमा मनाए हनिमुन
एजेन्सी, २४ असोज । प्रत्येक आमाले छोरीको विवाह गरिदिने इच्छा मनमा सजाएका हुन्छन् । तर,
वाग्मती, ३० असोज । मकवानपुरको हेटाँैडा–१५ स्थित रातेमाटेमा एक यात्रुवाहक बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा दुुईजनाको
नेपाली फुटबल प्रशिक्षक अतमुताइरी यसकारण दर्शकदीर्घामा बस्नुपर्ने
काठमाडौं, ३० असोज । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अतमुताइरी विवादमा आइरहन्छन् ।
नेपाललाई फुटबलमा इतिहास रच्ने मौका
काठमाडौं, ३० असोज । आज नेपालका लागि फुटबलमा ऐतिहासिक अवसर छ । साफ च्याम्पियनसिपमा भारतलाई